ကိုယ်လျှောက်သော ခရောင်းလမ်း ( အပိုင်း ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုယ်လျှောက်သော ခရောင်းလမ်း ( အပိုင်း ၂ )
ကိုယ်လျှောက်သော ခရောင်းလမ်း ( အပိုင်း ၂ )
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Apr 5, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 24 comments
ပါးမှာဒါဏ်ရာရပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ကျနော့်ကို အဘွားတို့ အိမ်ကခေါ်ထားလိုက်တော့တာပါဘဲ……………။
အဘွားက အဖေ့ရဲ့ မိခင်ပါ..။နာမည်က ဒေါ်တင်တဲ့ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာစစ်စစ်ပါ၊ အဘိုးက ပါကစ္စတန်က
ကျူလီယာအနွယ်…အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်ပါ..။ အဘွားကလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတိုင်းနေပါတယ်..။
အဘိုးကတော့ ဆုံးသွားပါပြီ၊ကျနော် မမှီပါဘူး..။အဘွားမှာ မောင်တစ်ယောက်ရှိတယ်..ဘိုးကြွယ်တဲ့ ။
သူကခင်ဘို့ ကောင်းသလို ရယ်ရတယ်..ခဏခဏဘုန်းကြီးဝတ်တယ်..ဗုဒ္ဓဘာသာနော်..သူဘုန်းကြီးဝတ်တိုင်း
အိမ်ရောက်လာပြီး..“ အမတင်..ကျုပ်ဘုန်းကြီးဝတ်ချင်တယ်..ရဟန်းဒကာမလုပ်ပေးပါ” လို့ ပြောတယ်..။
၁လနီးပါးလောက်ကြာရင် ဦးထုပ်လေးငိုက်စိုက်ဆောင်းပြီး ပုဆိုးလေးတမမ”နဲ့ရောက်လာပြီး….
“ အမတင် ကျုပ်ကို မိန်းမတောင်းပေးပါဦး.” တဲ့…။ ဘယ်အချိန်က လူထွက်လိုက်မှန်းတောင်မသိရပါဘူး။
ဟော ၂လ ၃လ ကြာရင် မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်း စမ်းစမ်း နဲ့ ငိုကြီးချက်မနဲ့ …………….
“ အမတင် ကျုပ်..ကျုပ် ဘုန်းကြီးပြန်ဝတ်တော့မယ်ဗျာ” လုပ်ပြန်ရော…။မိန်းမက ပစ်သွားတာလေ။
အမေကြီးကလဲ ထုံးစံအတိုင်း ရဟန်း ဒကာမပေါ့..။
အဲလိုမျိုး လုပ်တာ ကျနော်မှတ်မိသလောက် ၅ခါလောက်ရှိတယ်…။
ခဏခဏဆိုတော့ သူတခါလာငိုနေတုန်း ကျနော်က အမေကြီးနားမှာ ထိုင်နေရင်း ပြောမိတယ်..။
“ ဘိုးလေး…အဲလို ခဏခဏ လုပ်နေမယ့်အစား ၊ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ မိန်းမယူထားပါလား” ဆိုတော့……
သူကစိတ်ဆိုးတယ်…“ မင်းကို ငါ ဘယ်တော့မှ မုန့် ဘိုး မပေးတော့ဘူးကွာ” တဲ့ ။
အဒေါ်တွေက ၀ိုင်းရယ်ကြတယ်…။ ကျနော်တွေးတာက ဒီလိုပါ..။အမေကြီးနေထိုင်နေရတာက မွတ်စလင်
အသိုင်းအ၀ိုင်းပါ..။ သူလုပ်နေရိုးရိုး လူတွေက အမေကြီးကို ပြောမှာပေါ့..။ ကျနော်က ငယ်ပေမယ့် နည်းနည်း
အမေကြီးတို့ အိမ်မှာ နေ၇တာ ကျနော်အရမ်းပျော်တယ်..။အားလုံးကလည်း ကျနော့်ကို ချစ်တယ်..။
အမေကြီိးရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ မောင်တွေ တူတွေ ကြုံတုန်းပြောပြမယ်..။
အမေကြီးမှာ သားသမီး (၈)ယောက်ရှိတယ်။
၁။ ဒေါ်ရီ( ကျနော်က အမေမရီလို့ ခေါ်တယ်..ယောင်္ကျားကဆုံးသွားပြီ..သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်..မမမြင့်..
၂။ ဦးဟန်…အလံနီ ကွန်မြူနစ်..သူ့ နာမည်က ဗိုလ်ရောင်နီ၊ အမျိုးသမီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ..သားသမီး ၆ယောက်
၃။ ဒေါ်ဘူး ( ကျနော့်ရဲ့ ဒုတိယ အမေ..မျက်လုံးကအပြာရောင်နဲ့ ..အပျိုကြီး)
၄။ဦးထွန်းရွှေ…အမျိုးသမီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ..သားသမီး ၅ယောက်
၅။ဦးထွန်းဝေ( ကျနော့်အဖေ..သားသမီး (၇)ယောက်)
၆။ ဒေါ်ပု( အရပ်က အရှည်ကြီး)အပျိုကြီး
၇။ ဦးခေါ်လီ( အလံဖြူ ကွန်မြူနစ်..လူပျိုကြီး အရက် အရမ်းသောက်)
၈။ ဒေါ်စု ( အပျိုကြီး)
အဲဒီ အမှတ်စဉ်တွေထဲမှာ ၂။၄။၅ က အိမ်ခွဲနေတယ်..။ ကျန်တဲ့ သူတွေက အမေကြီးနဲ့ နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်
သွပ်မိုးအိမ်ကြီးမှာ အတူတူနေကြတယ်..။ ကျန်တဲ့ မြေးတွေ အားလုံ့းနီးပါးက နေ့ ရောညရော အမေကြီးအိမ်မှာ
လာနေကြတာဘဲ..။ ထမင်းဝင်စားချင်တဲ့ သူစား…လဘက်ရည် သောက်ချင်သူသောက် ပျော်စရာကြီးပါ..။
အမေကြီးမှာ မောင်ဝမ်းကွဲ၃ယောက်ရှိတယ်..။ ဘကြီးလှ။ ဘိုးကြွယ်နဲ့ဘဒွေးအောင်..အဲဒိဘဒွေးအောင်အမျိုးသမီးက မုံရွာ ချောင်းဆုံက ဘုရင်ဂျီ အနွယ်ခရစ်ယာန် ( ကျနော်အတွက်တော့ ဘာသာပေါင်းစုံ နတ်ရေကန်ကြီးထဲမှာ ကြိုက်သလောက်မေးမြန်းစပ်စု လေ့လာရတာပေါ့ )
ဘဒွေးအောင် သားသမီး၅ ယောက်ကလည်း ဒီအိမ်မှာဘဲ လာဆော့တာဘဲ…………………….။
ကျနော်နဲ့ မတည့်တာ တစ်ယောက်မှမရှိဘဲ..ထူးထူးခြားခြား သူတို့ အားလုံက ၀ိုင်းချစ်ကြတယ်…။
အဘွားတွေ အဒေါ်တွေက လိုလေသေးမရှိအောင်ကို ချစ်ကြပါတယ်..။ မမမြင့်က အရွယ်ကွာပေမယ့် ချစ်တယ်..။
ဒေါ်ဘူးကတော့ မိခင်တစ်ယောက်လိုကို ချစ်တာပါ..။
အဲဒီ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အတူ ကျနော် ၁ တန်းလောက်ရောက်လာတယ် လို့ ထင်ပါတယ်…။ ။
ခုနက ပြောပြတဲ့ မမမြင့်ပေါ့..။ သူက အပျိုအရွယ်လေ..။
မှတ်မှတ်ယယ ဥပုဒ်ကာလပြီးဆုံးပြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အိဒ် နေ့ မှာပေါ့…။
လူတွေကလည်း အများကြီး လာကြစားကြ..။ ကျနော်တို့ မြို့ လေးက ဘာသာရေး သိပ်အစွန်းမရောက်ကြပါဘူး။
အိဒ်နေ့ ဆိုပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အများကြီး လာစားကြတာဘဲ.. ပျော်စရာကောင်းတယ်..။
ကျနော် အိမ်ရှေ့ မှာ ဆော့နေတုန်း…အင်မတန် လှပတဲ့ မြင်းညိုကြီးနဲ့ လူတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်..။
တော်တော် ခန့် တဲ့ သူဗျ..။ အသားကဖြူတယ်..အရပ်မြင့်တယ်. မုတ်ဆိတ်မွေးရိတ်ထားတာ စိမ်းနေတာဘဲ။
ပြောရရင် ကုလားကားတွေထဲက ဇာတ်လိုက်လိုဘဲ…..မြင်းကရွှေဘိုမြင်းကြီး။
“ ဟေ့….မင်းနာမည် ဘယ်သူလဲ”
“ သြော်..ညီညီ ဆိုတာကိုး..မင်းကိုသိတယ်ကွ..မင်း မမမြင့် ရှိလား”
“ ရှိတယ် အိမ်ထဲမှာ…ခေါ်ပေးရမလား..”
“ တိုးတိုးလေးသွားခေါ်နော်..ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့ ”သူကပြောတယ်…
အိမ်ရှေ့ လဲ ရောက်ရော မမကကျနော့်ကိုဖက်နမ်းတယ်..ပိုက်ဆံတွေလည်းပေးတယ်..
“ မမသူနဲ့ သွားတော့မယ်..ညီညီကစားနေနော်..ဘယ်သူ့ မှ မပြောနဲ့ ” ဒီစာလေးနောက်မှ အမေဒေါ်ရီကို
ပေးလိုက်ဆိုပြီး စာရွက်ခေါက်လေးတခု ကျနော့်အိပ်ကပ်ထဲ ထည့်ပေးသွားတယ်။
အဲလိုပြောပြီး ဟိုလူက မမကို မြင်းပေါ်တင်ပြီး ထွက်သွားတော့တာဘဲ…………………..။
လူတွေကလည်းရှုပ်နေတာဆိုတော့ ဘယ်သူမှ သတိမထားမိပါဘူး၊ညနေစောင်း လူကျဲသွားမှ အိမ်ကလူတွေ
မမကို မတွေ့ မှန်းသတိထားမိတာပါ….။ ဟိုရှာဒီိမေးပေါ့……ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့ မှ ကျနော့်ဘက်လှည့်လာတာ။
အမြဲမခွဲ တစ်တွဲတွဲ နေတာက ကျနော်တို့ မောင်နှစ်မလေ..။
အမျိုးမျိုးမေး ကျနော် မပြောပါဘူး…။ နောက်ဆုံးမှ သူတို့ ကို သနားလို့ ပြောပြလိုက်တယ်..။
မမကို လူတစ်ယောက် မြင်းနဲ့ ခေါ်သွားတယ်လို့ ဒီမှာမမလည်း စာပေးခဲ့ တယ်လို့ ပြောပြီး စာရွက်ခေါက်လေး
ထုတ်ပေးလိုက်တာဘဲ..။ အဲဒီမှာ မမနဲ့ မြင်းညိုရှင်ပေးခဲ့တဲ့ ( အီတီ) မုန့် ဘိုးပိုက်ဆံတွေလဲ စာနဲ့ အတူထွက်လာတာပါဘဲ..။
စာဖတ်ပြီးတော့မှ သူတို့ အကြောင်းစုံသိပြီး ငိုကြယိုကြပေါ့..။
အမေမရီက ကျနော့်ပုခုံးကိုကိုင်ပြီး ညီညီရယ် နင့်အမကိုများနင်ကိုယ်တိုင် သူများလက်ထည့်ပေးလိုက်ရလားဟယ်
ငိုလို့ ဝမှ “နင့်အမ အဲလိုလုပ်သွားတာ နင် တခွန်းမှ မပြောလိုက်ဘူးလားဟဲ့ ”လို့ ပြောတော့ ……………..
“ ဟဲ့ ……..ညီညီလေး ရဲ့ ပြောလေ၊ နင်ဘာပြောလိုက်လဲ”
“ ဟိုဟာ….မမလို့ ..သေချာဖက်ထား..မြင်းပေါ်က ပြုတ်ကျလိမ့် မယ်…လို့ ”
စကားလဲ ဆုံးရော အမေမရီလက်က မြန်တာ..ကျနော့်ခေါင်းကို ခေါက်ထည့်တာ..ဂွပ် ကနဲဘဲ..။
ငိုတာချက်ခြင်းရပ်ပြီး ပါးစပ်ကလည်း တခွန်းပြောသေးတယ်..
“ တယ်…ဒီမသာလေး” တဲ့ ..။
နာသွားတဲ့ ခေါင်းလေးပွတ်ရင်း မျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ အမေကြီးနဲ့ အဒေါ်တွေက ပြုံးစိစိနဲ့ ..။
သူတို့ရီချင်နေတာ ကျနော်သိတယ်..အမေမရီကို သူတို့ ကြောက်လို့ အသံမထွက်တာ..။
ဘာသာစုံ လူမျိုးစုံ သွေးနှောလို့….
အရောင်ဆိုးမခံရရင် အားလုံးဟာ ဆွေမျိုးတွေချည်းပါပဲနော်…..
အဲဒီ အရောင်အသွေး တွေ ခွဲသွားတာလဲ ပို့ စ် တစ်နေရာမှာ ပါလာပါလိမ့်မယ်..။
တစ်ကယ်တမ်းတော့လဲ ဆွေမျိုးတွေ ဆိုတာ မှန်သလို..
ဲဂြိုလ်ကမ္ဘာ တစ်ခုက မျိုးဆက်သက်တမ်းရှည်နေတဲ့ သတ္တဝါ မျိုးနွယ်စုလေး တစ်ခုပါဘဲလေ..။
ရယ်စရာလေးနဲ့ ဆရာခေါင်က နဲနဲဖြေထားရဲ့
စောင့်ဖတ်ပြီးကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..
မနေ့က မဖတ်အားသေးလို့ နေရာ အရင် ဦးထားတာ။
ကိုနို ပြောသလို ဒီတစ်ခေါက်က တော့ စိတ်ကြည်စရာလေး အလှည့်ပေးလိုက်တော့ တော်သေးးးး
ဘဝကလည်း အမြဲ ဆိုးနေတာမှ မဟုတ်ပဲနဲ့လေနော့။
ညီညီ လို မောင်လေး တစ်ယောက်လောက် ရရင် အတော်အားကိုးရမယ်။
ကျုပ်ကို တော့ မြင်းညိုရှင်နဲ့ မလွှတ်လိုက်နဲ့နော်။
မြင်းတံဆိပ် ကား ပိုင်ရှင်လောက်နဲ့မှ ပေးလွှတ်ပါ ကို မင်းသားးးး
ညီညီဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ဆရာဘုန်းကြီးတောင် သြချရတဲ့ တိဟိတ်…နော်..
မြင်းတံဆိပ်နဲ့ ကားကို သေချာမှတ်ထားမှာ..ကိုယ်က ကားကို သေချာရွေးနေတုန်း..
ကိုယ်လူက အကြိုက်တွေ့ တာနဲ့…
“ ရပါတယ်..ညီညီ..မြင်းတံဆိပ် မဟုတ်လဲ ..မမလိုက်သွားတော့မယ်” ဆိုရင်တော့…
ကိုကျော်စွာရဲ့ အပိုင်း(၂)ကို ဖတ်ပြီးမှ အပိုင်း(၁)ကို ပြန်ဖတ်ရတယ်။ ထပ်ပြီး ထပ်ပြီး သိချင်လာအောင် ဆွဲဆောငိနိုင်တဲ့ ကိုကျော်စွာကို တကယ်လေးစားမိပါတယ်။
အညာနွေကပူတာနဲ့ထွက်လိုက်တဲ့ သွေးတွေ..။
ဆရာဝန်ကြီးက ဂရုစိုက်ပါတယ်..နာမည်က ဦးအောင်ထွဋ်ပါ..။
ရွှေဘို ဆေးရုံက ဝေးတယ်.. . . . . . . ဆိုလို့
ခင်ဦးဆေးရုံ များလားမသိဘူး – – –
အကို တွေးတာ အမှန်ပါဘဲ ..ခင်ဦးမြို့ ပါ..။
ဦးအောင်ထွဋ်က မြို့နယ်ဆရာဝန်(TMO) ပါ။ သူ့ဇနီး ဒေါ်သက်သက်ဇင်က လက်ထောက်ဆရာဝန် (AS) ပါ။ ဒေါ်သက်သက်ဇင်က ကျွန်တော့် တစ်ဝမ်းကွဲအစ်မပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ တစ်ဝမ်းကွဲမောင်နှမအားလုံးပေါင်းမှ ၈ယောက်ရှိတာမို့ သိပ်ချစ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအစ်မက ဆေးကျောင်းကို အစအဆုံး ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေ တက်ခဲ့တာပါ။ မောင်နှမတွေထဲမှာ သူကအကြီးဆုံး၊ ကျွန်တော်က အငယ်ဆုံးဆိုတော့ ကျွန်တော့်အမေလိုပါဘဲ။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ဆို ဒီအစ်မပြောင်းသမျှ မြို့တွေအားလုံး ကျွန်တော်လိုက်နေပါတယ်။ ၈တန်း အတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးဖြေပြီး ၁၉၇၄ နွေမှာပေါ့ . . . ကျွန်တော် ခင်ဦးကို တစ်လ လာနေဘူးပါတယ်။ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ မန္တလေးကထွက်လာပြီး ရွှေဘို ခင်ဦးလမ်းမှာ (ကန်ဘောင်အရှည်ကြီးပေါ်မှာဗျ . . .) တစ်လမ်းလုံး တား တားပြီး ရေပက်လိုက်ကြတာ တစ်ကိုယ်လုံး သဲတွေ ရွှံ့တွေနဲ့ ပျော်စရာကြီးပါဗျာ။ ဝေဘူဆရာတော်ကြီး မွေးနေ့လားမသိဘူး . . . အင်ကြင်းပင်ရွာကို (ရွာနံမည်မှန်ရဲ့လားဗျ) အိမ်နီးချင်း ကလေးရွယ်တူတွေနဲ့ မနက်အစောကြီး စက်ဘီးအုပ်လိုက်စီးပြီး ပျော်ပျော်ကြီး သွားလိုက်ကြတာ မမေ့ပါဘူးဗျာ။
ကိုကျော်စွာခေါင်သာ ရှိနေမှန်းသိရင် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကိုကျော်စွာခေါင်တို့ဆီ လာပြီး မုန့်စားလိုက်ချင်စမ်းပါဘိသဗျာ။
အံ့သြလိုက်တာ..ဆရာဦးအောင်ထွဋ္ဋ်ရဲ့ အမျိုးကိုး..။ ဆရာမကို သိပ်မမှတ်မိဘူးဗျ..
ပိုမှတ်မိလာတာက ဆရာဝန်ကြီးက အယ်လ်ဇေးရှင်းခွေးကြီးတွေ မွေးထားတယ်..
ညနေဘက်ခွေးတွေနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင် ကျနော်က ကြောက်တယ်..အနားမကပ်ရဲဘူး..
ပိုဆိုးတာက ဆရာ့ရဲ့ ကြက်ဆင်တွေဗျ..
ကျနော် ကျောင်းသားအရွယ် ရောက်လာတော့ ကျောင်းက ပြန်လာရင် သူ့ ကြက်ဆင်တွေက လိုက်ဆိတ်တာ
အင်ကြင်းပင်ရွာ ဆိုတာ အမှန်ပါဘဲ… ကျနော်က ဝေဘူဆရာတော်ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူတဲ့အချိန်မှ ရောက်ဘူးတာ..အဲဒီမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အုန်းပင်ကို တွေ့ ဘူးတာ..
နောက်ထူးဆန်းတဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေ ကြားရသိရတာ..။
ခင်ဦးက ပျော်စရာတော့ ကောင်းပါတယ်..
ဆရာဝန်ကြီးကိုလဲ ကလေးတစ်ယောက်က အခုချိန်အထိ ကျေးဇူး မမေ့ဘဲ သတိယနေပါတယ်လို့ပြောပေးပါ.. ကို အေးလွင်ဦး ခင်ဗျာ။
၁၉၇၄ မှာ ၈တန်းအတန်းတင်ဖြေတယ်။
ဂဇက်မှာ ကိုယ်ချည်းပဲ သက်ကြီးတန်းဖြစ်နေတာ.
အော် …… လောက လောက ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါလား
ဆရာခေါင်နဲ့ ကိုအေးလွင်ဦး အစ်မတွေနဲ့ဆြက်နွယ်ခဲ့ဖူးသလို ………
နောက်ထပ် ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုများဆုံကြလိမ့်ဦးမလဲ
ကျနော်လည်း ငယ်ငယ်က သဂျီးကို လေးဂွနဲ့ ဆော်ခဲ့ဖူးလားမသိ
ဒီနေ့တော့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖတ်ရပေမဲ့ ထပ်ဖတ်ချင်နေတုန်းပဲ။ နောက်တပိုင်းကိုလဲ အမြန်တင်ပါ ဆြာခေါင်ရေ။ ကိုရီးယားကားကြည့်နေရသလိုပဲ။ ကောင်းခန်းဆိုဖြတ်ပြီ။ ဆြာခေါင်ရဲ့ အရေးအသားကို အံ့သြလို့မဆုံးပါဘူး။ တကယ့်ကိုလှိုင်းစီးနေရသလိုပါပဲ။
ဝိတ်တင်း ဖော် သရီး
အတွေးတွေ အမြင်တွေ တမျိုးဖြစ်နေတာကိုး
အတွေး ထက် တယ် ဆိုရမလားပဲ ။
“ ဘိုးလေး…အဲလို ခဏခဏ လုပ်နေမယ့်အစား ၊ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ မိန်းမယူထားပါလား”
ဒီအပိုင်းမှာတော့ ဘာသာစုံ အရောင်မဆိုးသူများကြားက ခေါင် ပေါ့လေ
ဖတ်ရင်းနဲ့ အပျော်၊ အလွမ်းတွေကို ပေးနိုင်သော ဒက်ခေါင်…..
( ကျနော်အတွက်တော့ ဘာသာပေါင်းစုံ နတ်ရေကန်ကြီးထဲမှာ ကြိုက်သလောက်မေးမြန်းစပ်စု လေ့လာရတာပေါ့ )
ငိုလိုက် ရယ်လိုက် ပြုံးလိုက် မဲ့လိုက်နဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာ
တခါတလေမှာ တကယ့်ဘ၀တွေဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ဇာတ်လမ်းတွေ ထက် ဆန်းကြယ်တယ်။
ကိုယ့်အမကို မြင်းညိုရှင်နောက်ကို ကိုယ်တိုင်တင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုကတည်းက မြင်းညိုရှင်ရဲ့ ဥပဓိရုပ်ကြည့်ပြီး စိတ်ချလို့ဖြစ်ရမယ်။
အောင်သွယ်တော်ဖိုးရွှေညီကောင်းမှုနဲ့..ကျုပ်ကိုငယ်ငယ်က လေးဂွနဲ့ပစ်ဖူးတဲ့သူလားမသိ.. ပေါ်လာပြီ…